Top 5 iPhone Photo ayeey Apps - Photo Editors Best u iPhone
> Resource > iPhone > Top 5 iPhone Photo ayeey Apps u Edit Photos on iPhone
iPhone waa cadhoodaan oo dhan hadda oo waa in aad rabto in aad xaalkaa photos aad ku iPhone. Waxaa jira barnaamijyadooda tafatirka sawir aad u badan u iPhone on AppStore waana runtii adag tahay in la yidhaahdo oo ka mid ah waa u roon yahay ama aan. Haddii aad run ahaantii aad rabto inaad isticmaasho ah iPhone sawir tafatirka app wanaagsan in wax ka bedel iyo retouch aad sawiro ku iPhone, kaliya raac this article oo heli editor sawir dhab ahaantii weyn u iPhone.
In article soo socda, 5 sawirka barnaamijyadooda tafatirka hogaanka u iPhone ku qoran yihiin si aad tixraac. Just on akhriska iyo mid ka mid ah oo aad jeceshahay qaado.
Best iPhone sawir tafatirka app 1: PowerCam - Real-time tafatirka sawir
PowerCam waa app tafatirka sawir xor ah oo xiiso leh u ah iPhone ee ay Wondershare. Sidaa daraadeed, waxa aad codsan kartaa saamaynta-waqtiga dhabta ah si kor loogu qaado wareegtay aad sida sixir ah. Waa lacag la'aan in muddo xaddidan. Haddaba wax abuurkaaga oo lacag la'aan ah iyadoo 50 + saamaynta, ay ka mid yihiin wareeg ah usii, firirka midabka, sawir, iwm wareegtay Your noqon kartaa isla markiiba la wadaago ee YouTube, Flickr, Facebook, Twitter, Tumblr, iyo wax ka badan. Tani waxay sawir app tafatirka u iPhone taageertaa badan oo luqado, oo ay ku jirto Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Greek, Hungary, Talyaani, Jabbaan, Kuuriya, Poland, Portugal, Spain. Runtii fantastic, miyaanay ahayn? Baro wax badan oo ku saabsan PowerCam >>
Best iPhone sawir tafatirka app 2: Photoshop Express - free
Adobe Photoshop Express waa software tafatir ah oo lacag la'aan ah iPhone sawir oo kaa caawinaysaa in aad retouch sawiro aad si sahlan. Photoshop Express waxay bixisaa muuqaalada video tafatirka fudud oo sare si ay u caawiyaan dadka isticmaala hagaajin, sawiro dalagga, iwm sameeyaan oo kaliya kabacdi jiiday fartaada guud ahaan shaashadda.
Best iPhone sawir tafatirka app 3: Camera + - 59p
Camera + waa app kamarad iyo bixisaa saamaynta gaadhista badan sida Marxaladaha, Backlit, daruur, iwm Tani app for iPhone tafatirka sawir la Timaadda interface sahlan in la isticmaalo iyo bixiyaa qaababka tafatirka image weyn sida fipping, qoqobada, xuduudaha iyo abuurka.
Best iPhone sawir tafatirka app 4: Instagram - Free
Instagram dhab ahaantii waa iPhone qaybsiga sawir app qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka sawir. Si aad u isticmaasho, waxaad u baahan tahay in marka hore la abuuro xisaab. Ka dib markii aad saxiixdo, waxaad kala socon kartaa saaxiibada qaar ka mid ah inay fiiro gaar ah u photos ay wadaagaan iyo dar sawiro ka maktabadda sawir iPhone in lagu daro qaar ka mid ah saamaynta sawir si kor loogu qaado sawirrada.
Best iPhone sawir tafatirka app 5: FX Photo Studio - $1.99
FX Photo Studio yimaado iyadoo qiyaastii 181 saamaynta sawir si kor loogu qaado sawiro dhakhso leh. Ka sokow, waxaa kale oo ay bixisaa qaar ka mid ah hawlaha tafatirka sawir aasaasiga ah sida abuurka, hagaajin midabka sawir, iwm app iPhone sawir Tani waxa si wayn u soo dhaweeyay dadka jecel in ay sida diirada lagu daro in sawiro. Waxa kale oo aad la wadaagi karto sawiro aad u Facebook, Twitter, iwm
Haddii aad rabto in aad si aad u hesho awood dheeraad ah oo kasoo muuqdo qalab tafatirka hodan, aad si fiican u heli lahaa codsi desktop video tafatir sida DVD Muqaal dhise . Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u ruxruxaa kartaa sawiro iyo erayadaada galay duubey fantastik ah!